On oct 27, 2019 19 358
Notontosain’i Riana Raymond
Nifarana ny sabotsy lasa teo, tao Ankazobe ny fanazaran-tena manokana VONIZONGO 2019, nataon’ny vondron-tafika RECAMP, eo anivon’ny Tafika Malagasy. Naharitra herinandro izany, izay notontosaina tany anatin’ny tandavan-bohitry Tampoketsa. Vata miaramila, manodidina ny 200 no nandray anjara, niaraka tamin’ny fitaovana raitra sy matanjaka, izay nomen’ny fanjakana foibe azy ireo. Fitaovana, izay tsiahivina fa mifanaraka indrindra amin’ny iraka sy hetsika ataon’ny tafika eo anivon’ny Firenena Mikambana na ireo Miaramila misatro-manga. Efa am-perinasa ny fiara mifono vy, ny basy aman-tafondro vaovao, ny kojakoja manokana ilain’ny vata-miaramila.
Ankoatra izay, efa ampy ary azo lazaina fa mahafeno mihoatra ny 95 % ny fepetra takiana amin’ny lafiny teknika sy fahaiza-manao ihany koa ny miaramila malagasy. Anisany misongadina amin’ireny ny fifehezana ny paikady eo amin’ny fandresen-dahatra ny mpifanandrina an-databatra boribory, ny fifehezana ny tsy fampiasan-kery, fiarovana ny zo maha-olombelona na dia anatin’ny ady aza. Tsy atao ambanin-javatra koa anefa, ny fifehazana ny teny vahiny, toy ny anglisy sy ny frantsay, izay ho entina miasa any amin’ny toerana hamitana iraka.
Fisamborana ny mpihoko, nandritra ny fanazaran-tena VONIZONGO 2019
Hatreto, tsy mbola misy daty mazava, amin’ny mety hiangain’ny Recamp-Madagasikara, any ivelany saingy efa azo antoka fa tsy maintsy hisy izany. » Miankina amin’ny finiavana politika sy diplomatikan’ny mpitondra foibe izany », hoy ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika, ny jeneraly Rakotonirina Théophile. « Ny antony, mila fampiasam-bola avy amin’ny fanjakana aloha ny zava-drehetra, toy ny fividianana fitaovana, ny fanofanana ny miaramila sy fanaovana fanazaran-tena tahaka izao, ny fanetsehana ilay andian-tafika iray manontolo mankany amin’ny firenena hiasana sy hamitana iraka, manginy fotsiny ny fanelanelanana sy ny fandresen-dahatra ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona afrikanina mba hanaiky ny mahamatihanina ny Tafika Malagasy. », hoy hatrany izy.
Nilaza koa anefa ity manamboninahitra jeneraly ity, fa hiteraka tombony be dia be , ary hitarika fampandrosoana ho an’i Madagasikara ny fandefasana andian-tafika iray, mampandry tany. » Misy vola miditra ho an’ny fanjakana io, satria tsy vitan’ny hoe haverin’ny Firenena Mikambana ny vola lany tamin’ny fandaniana, manomboka amin’ny faha-90 andro nisantarana ny fampandrian-tany. Mbola higoaka tombontsoa mihoam-pampana koa ny vata miaramila izay hikarama amin’ny vola vahiny. Anisan’ny dokambarotra, hanome endrika tsara an’i Madagasikara ny fanaovana izany« , hoy izy, namarana ny resaka.
Ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika Malagasy, ny GDD Rakotonirina Théophile ( eo afovoany), sy ny lefiny voalohany sy faharoa
Ny GDD Rakotonirina jean Richard, Minisitry ny Fiarovam-pirenena
Etsy ankilan’izay, nitondra fanamarihana vitsivitsy amin’ny dingana tsy maintsy lalovan’ny Recamp, mialoha ny fiondranana mamita iraka any ivelany, ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Jean Richard, omaly. » Tsy mbola afaka mandeha avy hatrany kosa anefa isika, raha tsy misy ny tolotra sy fiantsoana ny Tafika Malagasy handeha hampandry tany. Sady tsy maintsy mbola misy koa ny fanadihadiana sy fanaovana tomban’ezaka avy amin’ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Afrikanina. Rehefa hitan’izy ireo fa feno ny fepetra, afaka ny mandefa tafika misatro-manga amin’izay i Madagasikara. », hoy izy.
Efa tamin’ny taona 2003, no nanana ny andian-tafika manokana « Renforcement des Capacités Africaines pour le Maintien de la Paix » na ny Bataillon RECAMP ny teo anivon’ny Tafika Malagasy. Mbola nijanona ho birao tsotra fotsiny izy io, hatramin’ny faha- 13 jona 2012, nivoahan’ny didimpanjakana laharana 2012-631, izay mametraka azy tamin’ny fomba ofisaly ho lasa vondron-tafika iray. 16 taona aty aoriana, vonona tanteraka amin’ny hetsika sy iraka takiana amin’ny vondron-tafika Recamp aty Afrika, i Madagasikara. Tsiahivina fa ny vondron-tafika Recamp dia, tolo-kevitra avy amin’ny Frantsay ary misy amin’ny firenena afrikanina, mampiasa sy miteny frantsay maromaro. Tanjona dia ny mba hampandraisana anjara feno an’ny afrikanina ny famahana ny olana mianjady amin’ny tany afikanina ihany. Tany amin’ny taona 1994 no namoronana ity rafitra miaramila iray ity.
Ampy ny traikefa saingy mbola hisy ny fanazaran-tena manaraka, hiaraka amin’ny sarinady iraisam-pirenena amin’ny volana desambra ho avy izao., hataon’ny Tafika malagasy
Ho an’i Madagasikara manokana, mirahalahy ny manamboninahitra, efa nibaiko sy nifehy azy ity, hatramin’ny taona 2012, naha lasa vondro-tafika azy:
Ny kolonely Rakotoarisoa Andriantsoavina Jocelyn, mpibaiko am-perinasa hatramin’ny taona 2017, sy ny kolonely Rakotoniaina Maminirina, 2012-2017
Ndrl: Tsy maintsy notakonana ny sary famantarana ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, eo amin’ny sary fanokafana ( à la Une) araka ny toro-mariky ny Talen’ny seraseran’ny minisitera. Tsy manan-jo ampiasa ny « Logo » ny tranokalam-pifandraisantsika